Hevitra fanomezana lehibe ho an'ny reny sy zazalahy kely
Ireto ambany ireto ny hevitra fanomezana 10 voalohany ary azo ampiharina amin'ny taona voalohany amin'ny fiainana.
1. Cake mofomamy
Ny mahazatra eo amin'ny Fanomezana zazakely - Afaka manafatra mofomamy mofomamy an-tserasera an-tsitrapo ianao, asaivo atambatra ao amin'ny fivarotam-panafody na hanao ny fomban-drazana. Ankoatry ny diapers dia miaraka amina kilalao sy kilalao malina koa izy io arakaraka ny taonany. Mariho ny haben'ny diaper mety rehefa misafidy.
2. Rompers amin'ny teny
Rompers miaraka amin'ny teny mahatsikaiky dia tena tany am-boalohany ary tena malaza. Ireo koa dia azo atao manokana. Averina indray fa zava-dehibe ny fahalalana ny haben'ny akanjon'ny zaza.
3. Karatra mavesatra
Malaza ihany koa amin'ny ray aman-dreny - ny karatra lehibe. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka maka ny dingana lehibe fampivoarana ny zaza amin'ny sary. Fahatsiarovana ho an'ny taona.
4. sobika fanomezana natokana ho an'ny tena
Ny sety fanomezana dia misy, ohatra, ny lovia voalohany, pacifiers, lamba firakotra, rattles ary sary. Ao anaty harona feno fitiavana no mipetraka, fanomezana mahafinaritra ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny.
5. boaty mozika
Ny boaty mozika klasika misy feonkira mampitony dia miaraka amin'ny zaza sasany matory moramora aorian'ny taona voalohany amin'ny fiainana. Na amin'ny dinosaoro, bera na alika. Misy safidy maro ho an'ny ankizilahy.
Hazakazaka marbra faha-6
Misy hazakazaka vita amin'ny marbra amin'ny sokajin-taona rehetra, ary na ny zazalahy faralahy aza dia tiany. Mandritra izany fotoana izany dia mampiroborobo ny fahaizan'ny motera ny lalana.
7. Tilikambo mitaingina
Mahatsapa fa ny ankizy tsirairay dia manana iray farafaharatsiny - ny fametrahana tilikambo azo ampiharina, mora entina ary mahaliana maharitra ho an'ny zazalahy. Mampiroborobo ny fahaiza-manao sy ny fahaizany mandre ihany koa izy ireo.
8. Famintinana napetraka
Amin'ity seta ity dia azo atao ny tanana sy ny dian-tongotra ary avy eo nolokoina araka ny ao am-ponao. Tsy mahafinaritra fotsiny ho an'ny ankizy.
9. Mpandeha an-jaza
Miaraka amin'ny mpandeha an-jaza, ny zaza dia tsy mianatra mianatra mitazona tsara kokoa ny tongony fotsiny amin'ny voalohany. Ireo singa marobe eo alohan'ny fiara dia mampiroborobo ny fahaizan'ny moto, ny fahaiza-manao ary ny fahatsapana fandanjana. Ny sasany koa milalao feonkira ary mamporisika ny zaza handeha.
Ny fijerena sary voalohany miaraka amin'ny tanana azo tratrarina - finday iray mitazona ny zaza sahirana rehefa manova lambam-pandriana, ao anaty farafara ary amin'ny tsofa, dia hetsika gaga izy ireo. Rehefa mividy finday dia zava-dehibe ny fijerena ny endrik'ilay finday amin'ny fomba fijerin'ny zaza mandainga. Tsy voatery ho tsara tarehy fotsiny izy io, fa ny zazakely kosa dia tsy maintsy mahay mamantatra ireo tarehimarika hiasan'ny finday.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 27. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords Baby, teraka, FANOMEZANA, Gifts, Hevitra fanomezana, Hevitra fanomezana, schenken
indray Lahatsoratra taloha: Zumba ao an-trano
more Lahatsoratra manaraka: Ankizy sy ny mahaliana ny fiara lehibe